Galaxy Tab S6: Ndị a bụ ahịa ya na Europe | Gam akporosis
Edere Ferreno | | Samsung, Mbadamba gam akporo
Izu a E gosipụtara Galaxy Tab S6 n'ihu ọha, Samsung ọhụrụ elu-ọgwụgwụ mbadamba. Na nkwupụta ya, a mara ọkwa ya na ndokwa ya ga-abụ na njedebe nke ọnwa Ọgọstụ a. Agbanyeghị na maka ugbu a anyị enweghị ụbọchị ntọhapụ. Enweghikwa data banyere ọnụahịa ahụ.
Ọ dabara nke ọma, n'echiche a anyị echebeghị ogologo oge. E gosipụtara ọnụahịa maka Galaxy Tab S6 na Europe. Ekele ha nwere ike ịhụ ego ole mbadamba nkume ọhụrụ a sitere na akara Korea ga-efu. Igodo mmalite na mpaghara ahịa a.
Dịka anyị nwere ike ịhụworị na nkwupụta ya, anyị na-ahụ ọtụtụ nsụgharị nke Galaxy Tab S6. Ihe kachasị mfe bụ nsụgharị ya na 6/128 GB nke ahụ na mbipute ya na WiFi ọ nwere ọnụahịa nke euro 699, ma ọ dịkarịa ala na Netherlands. Anyị nwekwara ụdị nke 8/256 GB nke a ga-akwụ ụgwọ na euro 779, na mbipute ya na WiFi.
Ọnụahịa ndị a dị iche na nke Germany, nke ga-abụ 749 na 899 euro n'otu n'otu, n'otu ụdị ndị anyị kpọtụrụ aha n'elu. Anyị na-ahụkwa ngwa dị iche iche maka mbadamba, nke anyị nwere ike ịzụta n'ahịa niile. Akwụkwọ mkpuchi ga-enwe ọnụahịa nke euro 69, mgbe mkpuchi keyboard ga-efu euro 179. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụta S-Pen, anyị ga-akwụ 59 euro.
N'oge anyị enweghị ọnụahịa nke nsụgharị 4G / LTE nke Galaxy Tab S6 a ga-enwe. Ọ bụ ezie na anyị ekwesịghị ichere ogologo oge ruo mgbe ha ghọrọ ndị isi. Ọ bụ okwu nke ụbọchị ole na ole na Samsung n'onwe ya ga-ekpughere ha ya. Ha nwere ike ịdị iche na mwepụta ha na Spain.
Ọ bụ ya mere, anyị ga-ege ntị na mwepụta nke a Galaxy Tab S6. Mwepụta nke ga-ewepụ mmasị n'etiti ndị ọrụ na-achọ mbadamba mbadamba nwere arụmọrụ dị mma dị ka nke a. Kedu ihe ị chere gbasara ọnụahịa ndị a nke mbadamba nkume nke akara Korea?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » E gosipụtara ọnụahịa Galaxy Tab S6 na Europe
Ọhụrụ interface nke Storelọ Ahịa Play dị maka onye ọ bụla